Shiinaha Portable gan gan nooca c adabtarada derbiga USB xeedho PD 18W Soosaarka iyo Warshadda | Staba Electric
Nooca gan-ga la qaadan karo ee la qaadan karo ee gidaarka xarkaha USB PD 18W
1. Qaab yar oo isukeen ah oo ku jira cabir saaxiibtinimo
*Xeedho PD 18W Faahfaahinta Faahfaahinta
Xeedho 18W PD is haysta oo leh USB-gudbinta awoodda macnaheedu waa lacag-bixin deg deg ah oo loogu talagalay qalabkaaga. Qalabkan safarka ah ee saaxiibtinimo ee labada xeedho ee darbiga ah waxaa loo farsameeyay inuu 5 jeer ka dhiibo awoodda xeedho heerka caadiga ah illaa 2 aalado isku mar.
Soo bandhigida isbeddelada ugu dambeeyay ee tiknoolajiyada xawaaraha sare leh, bixinta USB-C iyo la-qabsiga degdegga ah, xeedho-qaatahan keliya ayaa ah waxa aad u baahan tahay oo dhan si aad u awood u yeelatid aaladahaaga hadda jira ugana sii horreeyso qalooca wixii elektaroonig ah ee mustaqbalka. Labada dekedoodba waxay u gudbin karaan illaa 18W oo ah kharashka korantada sare ee wax walba laga bilaabo taleefannada casriga ah iyo kiniiniyada illaa laptops-ka USB-C ee awoodda u baahan sida 12-inch Macbook. Waxay taageertaa lacag degdeg ah iPhone si ay ugu soo oogaan iPhone 8 ama goor dambe eber illaa 50% 30 daqiiqo oo ay ku jiraan fiilada ku jirta, iyo aaladaha kale ee xawaaraha ugu fiican ku jira.?
Ujeedo ahaan loogu talagalay inay ahaato safar-saaxiibtinimo, xeedho badan oo USB PD ah ayaa si fudud ugu habboon jawi kasta oo guriga ah ama markaad banaanka ka joogto. Xeedhohan is haysta ayaa si siman u fadhiya derbiga si ay si fudud ugu habboonaato alaabta guriga ama meelaha ay adag tahay in la gaadho. Sidoo kale waa sifiican oo le'eg oo ku habboon jeebka ama boorsada, taas oo macnaheedu yahay waxaad heli doontaa helitaan dhakhso ah oo lagu soo oogo meel kasta oo aad u socoto. PD xeedho dhakhso leh oo ammaan ah oo lagu kalsoonaan karo-ka-hortagga xad-dhaafka, xad-dhaafka, kuleylka iyo wareegga gaaban.
PD xeedho gidaarka leh waafaqid & dabacsanaan sare, laba-in-mid xukun lacag taas oo awood u leh inay taageeraan dhammaan qalabka USB (A / C) ku shaqeeya sida telefoonada iyo kiniiniyada in ay u shaqeeyaan si madax-bannaan ama isku mar. Xeedho darbiga USB-ga oo leh naqshad furitaan la isku hagaajin karo ayaa kuu oggolaanaysa inaad ka fogaato xayiraadda meelaha kale iyo dib-u-dhigista dekedda USB A / C si loogu habeeyo ku-xirnaanta fiilooyinka ku xiran - gaar ahaan faa'iido leh marka la adeegsanayo fiilo koronto ama ilaaliye koror leh oo leh meelo badan. USB PD xeedho darbi leh awood qaybinta Intelligent qalabka.
*Xeedho Gidaarka 18W Parameter
Cabbir: 52 * 25 * 45mm
Bixinta Awoodda Degdega ah ee PD Wall Charger
Sii dhammaan taleefannadaada iyo kiniiniyadaada (oo ay kujiraan iphone iyo ipad) awood koronto degdeg ah oo shidan, iyadoo la keenayo koronto bixinta xawaare sare.
Dhignaashada & Dabacsanaanta Fiilooyinka USB Adabtarada
Xalka laba-hal-ku-dallaca oo awood u leh inuu taageero dhammaan qalabka USBC iyo USBA ee ku shaqeeya sida iPhone, Samsung iyo aaladaha kale ee USBC waxay u shaqeeyaan si madax-bannaan ama isku mar.
Ammaan ah & Lagu Kalsoonaan karo PD Xeedho Degdeg ah
Tiknoolajiyada ugu dambeysa waxay dhiirrigelisaa waxtarka shaqada iyo hagaajinta kuleylka kuleylka ee ka ilaaliya aaladaha ka hortagga xad-dhaafka ah, kuleylka, iyo kharashka badan.
Adabtarada USB xeedho Portable iyo laabma
Qaado masuuliyadaada meelkasta oo leh cabir jeebka kuxiran iyo fiilo isku laaban, qaab aad u yar oo iswaafajsan iyo aalado isku laaban ayaa xaqiijinaya la socodka ugu badan meel kasta oo aad tagtid.
Hore: Dekedda derbiga badan New lacag degdeg ah xeedho xarkaha isku laaban karo PD30W
Xiga: Taxanaha SVR-172 (0.5kVA-5kVA) Nooca gudbinta ee danab dejiyeyaasha leh muuqaal midab leh